Madaxweyne Farmaajo oo sharfay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya (Sawirro) - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay la kulmay Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaana Madaxweyne Farmaajo uu u muujiyay Madaxweynihii hore xushmad aad u weyn.
Kulanka ayaa ka duwanaa kulamadii hore ee Madaxweyne Farmaajo kula qaadanayay Hotelka uu degan yahay, waxaana uu sameeyay arrin cajiib ah oo muujineysa biseyl iyo yididiilo.
Halkan hoose ka akhriso qoraal kooban uu kulankaas ka sameeyay Maxamed Ibraahim Macalimuu
Waxa ay aheyd calaamad wanaagsan.
Madaxweynaha cusub ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa waxaa kulan ay albaabadu u xiran yihiin uu la qaatay Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd Shiikh Shariif Shiikh Axmed .
Ma ogi arimaha ay kawada hadleen mana arag cid wax iiga sheegta kulanka Madaxweynaha iyo Madaxweynihii hore ,hase yeeshee inta aan arkay waxa ay aheyd sidatan
Madaxweyne Farmaajo dadka uu beryahan ku qaabilayay deegaankiisa KMG ah iyagaa ugu tagayay qeybta sare ee uu ku shaqeynayay mana arag mana maqal cid uu u soo dagayay si uu u qaabilo xitaa wufuud caalami ah.
Caawa taa waa ay ka badalneyd ,waxa ii muuqanayay xushmad weyn oo Madaxweynaha cusub u hayay Madaxweynahii hore ee DKMG .
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu u soo dagay hoos ilaa iyo ilinka laga galo hoteelka Jazeera ee sida weyn loo ilaaliyo waxana uu sii diiran u soo dhaweeyay Shariif Shiikh Axmed Madaxweynihii hore oo si cajaaib leh ay isu marxabbeeyeen.
Dusha sare ayaa la isla tagay ,waa ay isla soo faqeen hadana markii uu baxayay madaxweynihii hore ,Madaxweyne Farmaajo waa uu la soo dagay Shariif Shiikh Axmed ilaa iyo meel ku dhow halkii uu u taagnaa gaarigii qaadi lahaa.
Markan danbe labada masuul waxa ka muuqatay waji furfurnaan iyo dhoollo caddeyn aan ku dhiiran karo ugu yaraan inaan iraahdo waxii ay kawada hadleen waa ay isku waafaqeen walow aanan garaneyn. waxa ay ahaayeen
Biseyl iyo yadidiilo ayaa ii muuqaneysa marka rag kursi qura ku tartamay oo midkood uu guuleystay hadana inta ay isu yimaadaan si saraaxad iyo xushmad ay ku dheehan tahay ay isku qaabilya. Ma aheyn dhaqankii aan arki jirnay waase calaamad wanaagsan oo cusub.
Waxaa qoray: Mohamed Ibraahim Moallimuu